Ungawenza Kanjani Backup iPhone nge-iCloud, iTunes & Backup iPhone to Computer
Namuhla, i-iPhone iya ngokuya ithandwa kakhulu empilweni yethu yansuku zonke. Ayisetshenziswa nje njengethuluzi lokuxhumana kepha futhi nendawo yokugcina amanye amafayela abalulekile njengezithombe, imilayezo, oxhumana nabo njll. Futhi ukuvikela idatha ye-iPhone nakho kubuye kubaluleke kakhulu, ngoba ezimweni eziningi, ungalahlekelwa yilolu lwazi. Isibonelo, mhlawumbe ungalahlekelwa idatha ethile uma uvuselela i-iPhone, noma ngeshwa, i-iPhone yakho ilahlekile noma yebiwe, uzofuna ngenkani idatha eku-iPhone emuva.
Njalo isipele idatha ye-iPhone kuyindlela enhle kakhulu yokukuhlenga kulezo zimo. Uyazi ukuthi wenza isipele kanjani i-iPhone? Ake ngikwazise ukuthi ngivame ukuyisekela kanjani i-iPhone yami.
Kunezindlela ezintathu ezisetshenziswa kaningi yimi, iTunes, iCloud ne-D-Port Pro.
Lapho ngiqala nje ukusebenzisa i-iPhone, ngasebenzisa isipele se-iTunes futhi Isipele se-iCloud ukwenza isipele i-iPhone yami, ngoba iphakanyiswe ngokusemthethweni yi-Apple futhi singasebenzisa i-5GB indawo yokugcina yamahhala ku-iCloud. Kepha ngithole futhi ukuthi bobabili bachitha isikhathi. Lapho wenza isipele, iCloud ne-iTunes zizokwenza isipele yonke idatha eku-iPhone yakho futhi enye idatha ongayifuni kuzodingeka yenziwe igcinwe ndawonye.
Kube yishwa kimi futhi i-D-Port Pro iphelile ubumnandi. Ngilithanda okokuqala lapho ngilisebenzisa. Kuhlukile ngokulondoloze iCloud nesipele se-iTunes, uma usebenzisa i-D-Port Pro ukwenza isipele nge-iPhone, ungazikhethela ngokukhetha izinhlobo zedatha, njengeMilayezo, Line futhi WhatsApp. Isipele asiseyona iphakethe layo yonke idatha, singaba nje uhlobo olulodwa lwedatha.
Manje ake ngingenise zonke lezi zindlela ezintathu engizisebenzisile futhi ungaziqhathanisa nezinye. Ngikholwa ukuthi nakanjani uzokhetha i-D-Port Pro njengami.
Ungawenza Kanjani Isipele ku-iTunes ku-iTunes
Ungawenza Kanjani Isipele ku-iCloud
1 Ungawenza Kanjani Isipele ku-iTunes ku-iTunes
Isinyathelo 1 Hola i-iTunes kukhompyutha yakho bese uxhuma i-iPhone yakho kwikhompyutha ngekhebula.
Uma umyalezo uphuma ekubuza ukuthi Ithembe le Khompyutha, landela imiyalo okufanele uyithobele. Uma amaphasiwedi we-iTunes eceliwe, faka ukuze uqhubeke.
Isinyathelo 2 Uma ukuxhumana phakathi kwe-iPhone nekhompyutha kwenziwa, kuzovela isithonjana sefoni. Chofoza isithonjana sefoni.
Isinyathelo 3 Chofoza Emuva Kamuva Manje, i-iTunes izoqala ukusekela ngokulondolozwa i-iPhone. Isipele sizogcinwa kwikhompyutha.
Amarekhodi wesipele wakamuva angahlolwa ngaphansi kwe-Latest Backups.
Kuzothatha isikhathi ukuqeda isipele, sicela ubekezele. Ungabona ibha yenqubo ngaphezulu kwesixhumi esibonakalayo.
2 Ungawenza Kanjani Isipele ku-iCloud
Isinyathelo 1 Xhuma i-iPhone kunethiwekhi ye-Wi-Fi.
Isinyathelo 2 Iya ku Amasethingi>Igama lakho (I-Apple ID, iCloud, iTunes & Store Store)>iCloud> Skrolela phansi ukuthola iCloud Backup
Isinyathelo 3 Thepha iCloud Backup bese uvula iCloud Backup. Uma usebenzisa i-iOS 10.2 noma ngaphambili, iya ku Amasethingi>iCloud> Isipele sokuvula isipele se-iCloud.
Isinyathelo 4 Thepha Emuva Kamuva Manje futhi ugcine idivaysi ixhunyiwe kunethiwekhi ye-Wi-Fi kuze kube yilapho inqubo isiqedile.
Ngaphandle kokusekela ngokulungiselela i-iPhone, ungahlelela futhi uhlele i-iCloud Backup okuzenzakalelayo. Izinyathelo zinjengaphansi,
Isinyathelo 1 Iya ku Amasethingi > Igama lakho > iCloud > iCloud Backup ukuvula i-iCloud Backup.
Uma usebenzisa i-iOS10.2 noma ngaphambili, iya ku Amasethingi > iCloud > Isipele ukuvula i-iCloud Backup.
Isinyathelo 2 Xhuma i-iPhone emthonjeni wamandla kunethiwekhi ne-Wi-Fi.
Isinyathelo 3 Qinisekisa ukuthi isikrini se-iPhone sikhiyiwe nokuthi unesikhala esanele sokugcina ku-iCloud. Inqubo yokusekelayo izoqala ngokuzenzakalelayo.
3 Ungawenza Kanjani Isipele ku-Computer kuya kwikhompyutha
Isinyathelo 1 Faka futhi usebenzise isipele sedatha ye-iOS uphinde ubuyisele. Esibonakalayo esikhulu, chofoza i-Back Up & Export kusuka kudivayisi.
Isinyathelo 2 Xhuma i-iPhone yakho kwikhompyutha ngekhebula.
Isinyathelo 3 Chofoza Yenza Isipele esigcwele.
Ngemuva kokuxhuma, ungakhetha phakathi Yenza Isipele esigcwele, Yenza isipele Imilayezo, Yenza isipele WeChat futhi Yenza isipele ku-WhatsApp ngokwesidingo sakho. Akunandaba ukuthi ukhetha yiphi, izinyathelo ezilandelayo ziyefana, ngakho-ke ngithatha kuphela Yenza Isipele esigcwele njengesibonelo.
Ngemuva kokuchofoza Yenza Isipele esigcwele, I-D-Port Pro izoqala ukwenza isipele. Sicela ungayikhiphi i-iPhone yakho ngesikhathi senqubo.
Lapho ukwenziwa isipele sekuqediwe, kuzokwazisa ngokubonisa isikhombimsebenzisi esingezansi. Kuze kube manje, ukwenziwa isipele sekuqediwe.
Ngemuva kokuqhathanisa okungenhla izindlela ezintathu zokusekela i-iPhone, ucabangani nge-D-Port Pro? Awukhangwa nguwe? Empeleni, i-D-Port Pro inemisebenzi eminingi ngaphezu kokuxhasa i-iPhone kuphela. Ingakhipha nedatha kusuka kubhekhaphu noma ibuyisele ku-iPhone. Yonke le misebenzi iletha ukukhululeka okuhle empilweni yakho nge-iPhone. Uma usebenzisa i-D-Port Pro kakhulu, uyithanda ngokwengeziwe.
Landa Isipele se-iOS uphinde ubuyisele MAHHALA Manje!
Thenga Isipele se-iOS uphinde ubuyisele Manje!
I-OneC Click to Backup iPhone Idatha ku-Mac noma i-Windows uphinde ubuyisele kalula.
Ungayisebenzisa Kanjani iCloud Ukwenza iCloud Backup
Idatha yokusekelayo ye-iPhone
Isipele se-iPhone ngaphandle kwe-iTunes
Yenza iCloud Backup
Isipele se-iPad ku-iCloud
Izithombe zesipele ze-iPhone
Isipele Oxhumana nabo ku-iPhone
Isipele se-iPhone ku-Mac